Iindaba -Indima ebalulekileyo yeebheringi zokulungisa inaliti koomatshini bezolimo
Indima ebalulekileyo iibheringi mqengqeleki inaliti oomatshini kwezolimo
Oomatshini abasetyenziswa kwimveliso yezolimo badlala indima ebalulekileyo ekuveliseni ukusebenza okuphezulu kunye nokuzinza, kwaye iibheringi ezininzi zeenaliti ziyafuneka koomatshini bezolimo. Ndiza kukwazisa namhlanje.
Oogandaganda baye baba yeyona asethi iphambili kwimveliso kunye nokuphathwa kwezityalo. Ngaphaya koko, kuxhomekeke kwisikali sokwenziwa komsebenzi, banokuba ngumthwalo omkhulu kwizilwanyana.
Iitrektara mazibe nakho ukusebenza ngokufanelekileyo kuyo yonke imo yezulu nakwiimeko zomhlaba. Oku kunokuthetha ukuba inaliti ethwele kufuneka ikwazi ukumelana nongcoliseko lwetywina oluvela kubutyobo bamanye amazwe, isebenze kudaka olugqithisileyo nakumanzi, kwaye inokubanakho ukungalungelelani kakuhle.
Ukuze uqhubeke nokugcina uqoqosho, oomatshini abasetyenziswa kwimveliso yezolimo badlala indima ebalulekileyo ekuveliseni ukusebenza ngokukuko kunye nemveliso ezinzileyo, kwaye iibheringi ezininzi zeenaliti ziyafuneka koomatshini bezolimo. Ndiza kukwazisa namhlanje.
Ukuze uqhubeke nokugcina uqoqosho, kwanaphantsi kweemeko ezinzima zokusebenza, ubomi benkonzo yetrektara kunye namacandelo ayo kubalulekile kakhulu.
Iibheringi zeenaliti zisetyenziswa kwizinto ezininzi, kubandakanya iinjini, iibhokisi zegiya kunye nevili letrektara. Ukusebenza ngempumelelo kwezi iibheringi zokuhambisa inaliti kunceda ukubamba kunye neetrektara zombane zifumane amandla angaphezulu emhlabeni.
I-baler ayisebenzi ubuninzi bobomi bayo kwaye inokuchaphazeleka zezinye iimeko ezinzima, ezinje ngokufuma, ngexesha lokuvala. Le yingxaki kwimisebenzi yangaphakathi yamafama, ngakumbi xa amafama efuna oomatshini bawo, kwaye oomatshini babo bephezulu.
Emsebenzini, i-baler kufuneka iqhubeke nokusebenza kwisaqhwithi sothuli. Iibheringi zayo zeenaliti zixhasa iiplaleys kwaye kufuneka ziqhubeke zithembekile. Ukutywina okusebenzayo kubaluleke kakhulu kubomi beebheringi zeenaliti zomatshini. Ngokutywinwa okufanelekileyo, kuncinci ukubakho kokungcoliseka kunye nokwenzakala okuncinci.
Abavuni banokudlala eyona ndima inkulu kuzo zonke izixhobo zasefama. Kwakungasebenzi ixesha elininzi lonyaka, emva koko kwafuneka ukuba lenze inani elikhulu lemisebenzi ngexesha elifutshane. Nxiba kwaye ukrazule ngexesha lokusebenza, kudityaniswe nexesha lokuphumla elinamava kumatshini, kubeka uxinzelelo olukhethekileyo kwiibheriti zenaliti kunye neminye imisebenzi yangaphakathi.
Njengazo zonke izixhobo zezolimo, ukudibanisa abavuni kufuneka bathembeke ngokupheleleyo. Ulondolozo olungalindelekanga kunye nexesha lokuphumla zibiza kakhulu kungekuphela kwiipokotho zamafama, kodwa nakwindawo abahlala kuzo.
Umvuni angasebenza kwindawo enothuli, enodaka, imozulu embi kunye neemeko zomhlaba. Uyilo lweebheringi zenaliti kufuneka zingqinelane, kwaye amatywina kufuneka athembeke kakhulu ukuze aba matshini bakwazi ukusebenza ngexesha lokuvuna.
● Iibheringi ze-XRL zineebheringi ezintsha ezintsha kunye neendlela ezintsha zokuthambisa, izinto zokuthambisa, amatywina kunye nezivamvo ezisetyenziswa kwimakethi yoomatshini bezolimo minyaka le. Naphantsi kweemeko ezinzima zokusebenza, ubomi benkonzo yetrektara kunye nezinto zayo kubalulekile.